Dalalka bariga Afrika oo xalraadin ka dhex bilaabaya dowladda koonfurta Sudan iyo kooxaha hubaysan – Radio Daljir
Dalalka bariga Afrika oo xalraadin ka dhex bilaabaya dowladda koonfurta Sudan iyo kooxaha hubaysan
Diseembar 21, 2013 2:11 b 0
Jubba, December 21, 2013 – Ergo wasiiro ah oo ka socda dalalka bariga Afrika ayaa weli ku sugan magaalada Jubba ee xaruunta koonfurta Suudaan, iyagoo isku deyaya inay qaboojiyaan colaadaha ka soo huraya dalka ugu da?da yar Afrika.
Wasiiradda arrimaha dibeda ee dalalka, Soomaaliya, Itoobiya, Kenya, Djabuuti, Suudaan iyo Uganda ayaa ku sugan Jubba, waxayna la kulmeen madaxweynaha dalkaas Silver Kiir oo ay ka wada-hadleen sidii xal loo heli lahaa.
Wasiirka arrimaha dibeda ee dalka Itoobiya oo hugaaminaya wefdiga wasiirada ah ee ku sugan magaalada Jubba waxaa uu saxaafada u sheegay in xal raadintu weli socoto, in kastoo uusan bixin faahfaahin dheeraad ah.
?Waa xiligii hugaamiyaasha koonfurta Suudaan ay hubka iska dhigi lahaayeen hoosna loo dhigi lahaa dhibaatada soo gaaraysa rayidka.? Ayuu yiri wasiirka arrimaha dibeda ee USA.
Dowladda maraykanka ayaa iyana ergay gaar ah u dirtay koonfurta Suudaan, si uu isna qayb uga noqdo dhexdhexaadinta dowladda iyo kooxaha hubaysan oo qaybsaday meelo ka tirsan gobolka Junglei ee bariga dalka koonfurta Suudaan.
Colaado loo badinayo inay ku salaysan yihiin hab beeleed iyo mid siyaasadeed ayaa weli ka socda gobolo ka tirsan koonfurta Suudaan, Madaxweyne Silver Kiir ayaa sabtidii ku dhawaaqay in uu dhicisoobay afgembi lala damacsanaa dowladiisa wixii xiligaas ka dambeeyeyna dagaalada ayaa sii xoogaystay.
Madaxdii siday gurmad ka yimi Banaadir oo maanta tegaya meelaha xoolaha lagu qaybiyo (Dhegeyso)
Madaxweyne Xasan sheikh oo iclaamiyey xukuno lagu fulin doono kooxaha dhigta jid-gooyooyinka